धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाद्वारा कानून विपरीत शेयरको भित्री कारोबार - Arthasansar
बुधबार, १३ साउन २०७८, ०६ : २९ मा प्रकाशित
गत आर्थिक वर्षमा शेयर निष्कासनको तयारी गरे पनि प्रक्रिया पूरा नभएकाले आगामी २० साउनमा निष्कासनका लागि अनुमति दिन धितोपत्र बोर्ड समक्ष प्रस्ताव गरिन लागेको कम्पनीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बताए। शेयर निष्कासनका लागि गत ४ चैतमा कम्पनीले ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकका रूपमा नियुक्त गर्न सम्झौता गरिसकेको छ ।
सर्वोत्तमले प्रतिकित्ता रू. ७५० मा शेयर बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको कम्पनीका अध्यक्ष न्यौपानेले बताए। तर, यो मूल्य बुक बिल्डिङको प्रक्रियापछि मात्रै तय हुनेछ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. ७७ करोड ७६ लाख नाफा कमाएको थियो। सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष यसको नाफा रू. १ अर्ब १७ करोड १७ लाख थियो। अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ मा यसको खूद नाफा सवा अर्ब हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ।
यो समाचार हिमाल खबर पत्रिकामा रमेशकुमार न्यौपानेले लेखेका छन् ।